Zaadiig Abrahaa: ''Kanan dhiibame Raayyaa waanan ta'eefiidha'' - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa Miseensa ABBUT kan turan obbo Zaadiiq Abrahaa hooggantoota addichaan dorsifamaan ture jedhan.
Miseensa Aadda Bilisa Baasaa Uummata Tigraay 'TPLF' kan turan obbo Zaadiig Abrahaa sababoota addicha gadhiisuu isaanii duuba jiran BBC'tti himaniiru.
Dhaabbaticha waliin garaagarummaan qabu erga jalqabee tureera kan jedhan obbo Zaadiig, jijjiramuu mala yaada jedhus waanan qabuufin yeroo fudhadhe jedhu.
Booda keessa jijjiirama fudhachuu caala jijjiirama waliin wallooluu hubannaan murtee akka fudhatan BBC'tti himan.
Ministira muummee Abiyyi Ahimadiifi Ittaanaa Ministira muummee Dammaqaa Mokonniin sagantaa jijjiiramaa durfamaa jiru ABBUT deeggaruutu irra ture.
Gamaaggama waliigalaa kootiin garuu ABBUT jijjiirama kana hin fudhanne. Jijjiiramni kun amantaa kootiin murteessaadha. Biyya kanaaf yoo xiqqaate malee hin baayyatu.
Itoophiyaaf jijjiirama kana caalutu barbaachisaan. Isa xiqqoo kana fudhachuu baannaan akkam ta'a. Kaan hafee yeroo hidhamtootni hiikaman waldiddaan ture.
Akka dhaabaatti ejjennoon ture, hooggantootni dhuunfaan ilaalchi ajaa'ibaa calaqqisan, akka dhuunfaattis miidhaan narra gahe, bal'ina dirree Dimookrasii fudhachuu miti hidhamaa gadhiisuu, dogoggora isaa sirreessuu diduu fi darbees gufachiisuuf yaaluutu ture.
Kana ija kootiin argeera. Ani miseensa koree gidduugaleessaa ta'uu hin fedhu jedhee dubbadheera. Kanaaf fedha kootiiniin gadhiise.
Dhimma filannoo koree gidduugaleessa ABBUT
Ani filatamuu hin fedhun ture. Ni hayyamumoo hin hayyaman isa jedhu dhiifnee aniis miseensa koree giddugaleessaa hin ta'u.
ya'ii addichaarratti namni maqaa koo eere ture warri mormaniis turan. Nama 1,500'tu ture wayitan dubbi kana dubadhu wanti nama hanganaa duratti dubbatame soba miti, dhugaa waliin yoo wal lolan malee.
Sababni gadhiisuu keessaannii muufii dhaabbaticharraa qabdaniidha?
Xalayaan koo waayee mufachuu miti kan haasa'u. Qajeeltoowwan bu'uuraan kaase. Dimookrasii, dhimma Raayyaa achiis miidhama narra gahe.
Kunniin mufii miti. ABBUT dhaaba naaf ta'u akka hin taane, keesumaa hooggantootni isaa fi dhaabichi dimookraatawaa akka hin taane, ergan hubadhee bubbuleera, yeroo sirrii eeggachaan ture. Sammuu koos amansiisuun waan narra tureefi kaniin yeroo fudhadhe.
Miidhaan akka dhuunfaatti isinirra gahe maali?
Dhuunfaatti hooggantoota addichaa gurguddoorraa doorsifni narra gahaa ture. Amma maqaa namoota kanaa dhahuu hin fedhu. Gochi isaanii akka gocha addichaatti ilaalama. Yoo nama arrabsaniis yoo waa gaarii hojjetaniis addicha bakka bu'aniiti.
Kuni hundi kan narratti raawwatame hidhamtootni siyaasaa jiru jedhee waaniin amanuufi uummatni Itoophiyaa akka beeku waaniin godheefi. Anaaf sana gochuun koo sirriidha. Kun ummata Tigraayis yoo fayyade malee hin miidhu.
Akka heera biyyaatti hidhamaan siyaasaa jiraachuu hin qubu, dhaabni Dimookrasiifin qabsaa'a jedhuus dararaa hayyamuu hin qabu. Kanaaf murteen koo sirriidhan jedha.
Murtee sirrii kana fudhachuu kootiin garuu qaamotni ergama badii qabaniifi aangoo isaaniitti dhimma bahan miidhaafi doorsisa narraan gahaniiru.
Miseensonni addichaa badii anarratti raawwatameef na cinaa dhaabatniis ni jiru. Yoo haa yaadnuuf jenne gocha akka nama dhuunfaatti raawwatameetti fudhannee bira darbuu dandeenya.
'Ani Raayyaa qulqulluudha'
Dhalli namaa kamuu miidhaan bakka tokkotti raawwatamu isa ilaallata. Qabsoof daangaan hin jiru akka qajeeltootti.
Haata'u malee ani ilma Raayyaa qulqulluudha. Uummatni Raayyaa oduu sana dhagahee kolfaa jira soba adii soban, akkamitti sadarkaa kanatti gadi bu'u jedhee. Aniis sadarkaa sanatti gadi bu'uu hin fedhu.
Naannoo irraa hin dhalanneefis quuqamuun gaariidha ani garuu Rayyaa qulqulluudha. Lammii Itoophiyaati.
Kanaaf miidhaan uummata Raayyaratti raawwatamaa jiru na ilaallata.